"रूबल बूम" कम्पनीहरूको समूहको रिक्तिका बारेमा विज्ञापनबाट धेरै नौकरी खोज्नेहरू आकर्षित हुन्छन्। यस फर्मको बारेमा कर्मचारियों बाट प्रतिक्रिया अस्पष्ट छ, तर तिनीहरूको आधारमा, भविष्यको कामको सामान्य विचार आकर्षित गर्न सम्भव छ।
आधुनिक बजारको अवस्थामा, कहिलेकाँही धेरै उद्यमहरू ग्राहक र मुनाफा गुमाउँछन्, जीसी "रूबल बूम" राम्रो काम गर्दैछन्। के यो मतलब छ कि निगमका कर्मचारीहरू राम्ररी बाँच्न सक्छन्? के यो स्थिर कम्पनी हो? के प्रस्तावित रिक्तिहरू यथार्थवादी हुन्? के प्रतिज्ञा गरिएको रकममा वेतन भुक्तानी गरिएको छ? नयाँ खारेज गरिएको कर्मचारीलाई सेवामा प्रवेश गर्न पछि धेरै महिनाहरू हटाइने छैन, राम्रो कारण बिना? के यो कम्पनीमा बढ्न सम्भव छ? हामी यी प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौं, कम्पनीका कर्मचारीहरू "रूबल बूम" बाट प्रतिक्रियाको आधारमा।
थोक र रिटेल सञ्जालले 1999 देखि घरको रसायन र सुगन्धको बजारमा सक्रिय रूपमा प्रचार गरिरहेको छ। हाल, लगभग 1000 आउटलेटहरू सर्तोभ, ओरेनबर्ग, वोल्गोग्राड, लिपेत्स्क, समारा, अस्टक्यान र रियाजान क्षेत्रहरूमा लगभग 16 वटा क्षेत्रहरूमा सञ्चालन गर्छन्।
अभिभावक कम्पनी सेराटोभमा स्थित छ। कम्पनीहरूको समूहको स्वामित्वको जटिल जटिल छ। एसोसिएशन "रूबल बूम" मा लगभग दस कानुनी संस्थाहरु र व्यक्तिगत उद्यमीहरु शामिल हो, यिनीहरु मध्ये - टीडी "अब्बत" LLC, अब्बा एम एलएलएल, अब्बा टीके LLC, कमसेन्केया ई.ई., आईपी रासपिन्सन जी। Y. वास्तवमा, निगम अर्गडी बोरिसोविच बुफनसँग सम्बन्धित छ - एक युवा व्यवसायी र अभिनेता जसले लेडीगागा "अलेजान्ज्रो" को भिडियोमा अभिनय गरेर आफूलाई प्रतिष्ठित गरेर, हलिवुड प्रोडक्टर्सलाई $ 1 मिलियन भुक्तान गरे।
पसल "रूबल बम" (कर्मचारी प्रतिक्रियाहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ) को लागि धेरैले रोजगारीका समस्याहरू सुल्झाउने एक लामो साधन भएको छ। यहाँ यहाँ छ कि अधिकांश सहर र ग्रामीणहरूले आफ्ना मनपर्ने शैम्पो, ग्यालेरी गल्स, टूथपेस्ट, धुलाई पाउडर, जुत्ता पोल किन्छन्। प्राय: गृहिणीहरूको लागि "रूबल बूम" को लागि खरीदारी आदतको विषय बनेको थियो।
हाल, निगमले औषधिहरूको नेटवर्कलाई सफलतापूर्वक यसको स्टोरमा विकास गर्दछ। खरिदहरूलाई निम्न कारणका लागि "रूबल बूम" मनपर्थ्यो:
समतलमा घर जीवनमा आवश्यक सबै चीजहरू छन्;
सपिङ हल्सहरू धेरै विशाल हुन्छन्, स्व-सेवा क्षेत्रहरूमा पङ्क्तिहरू व्यापक छन्,
मूल्यहरू लोकतान्त्रिक हुन्;
प्रायः त्यहाँ कार्यहरू छन् जुन तपाईं सामानमा किन्न सक्नुहुनेछ वा बोनसहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
जीसी "रूबल बूम" को मार्केटिङ सर्भर बजार अवस्थामा खराब कुरा होइन। अब, जनसंख्याको आउँदो हुँदा, व्यापारिक नेटवर्कले सशर्त घरेलू प्रसाधन सामाग्री (चेन्ज क्यान्सरको मूल्यहरु - 40 रुबलहरु बाट सक्रिय गर्दछ।) र यसको ब्रान्ड 1b अन्तर्गत सस्तो सामानहरू प्रदान गर्दछ।
कर्पोरेट प्रशासन नयाँ स्टाफमा रुचि छ
यो ज्ञात छ कि कम्पनी "रूबल बूम" (स्टाफ समीक्षाहरू, रिक्तताहरू - प्रायः जानकारी वेबमा कम्पनीको खोजी गरिएको छ), कर्मचारी नियमित रूपमा भर्ती गर्दछ। सामान्यतया इन्टरनेटबाट इन्टरनेटमा तपाईंले 1300 भन्दा बढि नौकरी खोजी विज्ञापनहरू रूस (औसत प्रति 81 सम्म) खोज्न सक्नुहुनेछ। उच्च वेतन (150 000-300 000 रूबल) सँग काम गर्ने प्रस्तावहरू छन्। वित्त, मार्केटिंग, विज्ञापन, विदेशी आर्थिक गतिविधि, रसदमा संकीर्ण विशेषज्ञहरूको लागि।
के यो मतलब छ कि कम्पनीमा उच्च कर्मचारीको कारोबार छ? सबै होइन। अफिस, पसलहरू, गोदामहरू कर्मचारीहरू सामान्यतया स्थायी छन्। प्रायः प्राय: नयाँ कामहरू खारेज गरिएका छन्, जसले कम्पनीको लागि6महिना भन्दा कमका लागि काम गरेको छ। एक नियमको रूपमा, यो तथ्यको कारण हो कि जवान विशेषज्ञहरूले कामको प्रकृतिको खराब विचार राखेका थिए। रिक्त पदहरूको लगातार प्रकाशनको कारण यो तथ्य हो कि "रूबल बूम" ले गतिविधिको मात्रा बढाउँछ, प्रायः नयाँ स्टोर खोल्छ।
जानकारीका स्रोतहरू: कम्पनीको बारेमा थप पत्ता लगाउन कसरी?
रोजगारीमा अन्तिम निर्णय गर्नु अघि, "रूबल बूम" जीसी किनमेल गर्न निश्चित हुनुहोस्। ग्राहकहरूसँग काम गर्ने कर्मचारीहरूको प्रतिक्रियाले हामीलाई भविष्य सेवाको प्रकृतिबारे धेरै सिक्न अनुमति दिन्छ।
ध्यान दिनुहोस् कि अशाभ विक्रेताहरू, क्यासिनरहरू, सुरक्षा गार्डहरू। यदि पसल प्रबन्धक, पर्यवेक्षक वा लेखा परीक्षक हॉलमा उपस्थित छ भने, व्यापार मर्मतका कर्मचारीहरु संग कुरा गर्दै के कुरामा उनिहरुलाई छुट्याउने प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाई नियमित रूपमा "रूबल बूम" मा घरको रसायनहरू खरीद गर्नुहुन्छ भने, सम्भवतया, सूचना कि भण्डार कर्मचारी स्थिर छ: उस्तै विक्रयहरू र क्यासिफिकहरू ग्राहकहरू एक वर्ष र लामो लागि सेवा गर्छन्।
जीसी "रूबल बूम" को बारेमा इन्टरनेटबाट बेवास्ता गर्नुहोस्। विशेष साइटहरू र फोरमहरूमा प्रतिक्रिया कर्मचारीले पेशा र कार्यस्थलको छनौट निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ।
जीसी "रूबल बूम" मा काम को सामान्य अवस्था
रोजगारी सम्झौतामा कुन महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू हटाइनेछ?
मजदूरी। विभिन्न पदहरूमा कर्मचारीहरूको मासिक आय:
विक्रेता-कैशियर - 17 000-18 000 rubles।,
स्टोर को हेड - 25 000-30 000 rubles।,
बिक्री प्रतिनिधि - 25 000-30 000 rubles।,
पसलहरु को एक समूह को प्रबंधन - 65 000-75 000 rubles।,
क्षेत्रीय स्टोर प्रबन्धक - 100 000 rubles।
एकाउन्टेंट - 14 000-17 500 rubles।,
लेखा परीक्षक - 30 000-50 000 rubles।,
प्रणाली व्यवस्थापक - 15 000-30 000 rubles।,
वित्तीय प्रबन्धक - 25 000 rubles।,
कर्मचारी गोदाम - 40 000-60 000 rubles।
2. अपरेटिङ मोड। कार्यालय कर्मचारीहरूको लागि: हप्ता5दिन, 9.00 देखि 18.00 सम्म। स्टोर र गोदामहरुको कर्मचारीहरु - एक परिवर्तन कार्यक्रम: एक दिन2दिन,2प्रति रात,4दिन बन्द।
3. रातभर काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि, यो कर्पोरेट बसको डिलीवरी घरको लागि प्रदान गरिएको छ।
4. धेरै पोस्टहरूको लागि परीक्षण अवधि 1 महिना हो।
व्यापारिक सञ्जालमा "रूबल बम"
निगममा सेवाको सकारात्मक पक्षहरूको बारेमा कुरा गरौं। कर्मचारीहरूले उनलाई धेरै बोलाउँछन्:
1. आकर्षक काम। कम्पनीहरु "रूबल बूम" (यस मुद्दामा कर्मचारीको राय समान छन्) को विकास को लागि धेरै मौका दि्छ। यहाँ तपाईं ठूलो तंत्रमा एक कोलग जस्तो महसुस गर्नेछैन। रोजगारदाता विभिन्न प्रकारका जिम्मेवारीहरू लिन इच्छुक कर्मचारीहरूको बारेमा सकारात्मक छ।
2. स्थिर "सेतो" वेतन। कम्पनीमा लामो काम अनुभव भएका अनुभवी कर्मचारीहरु शुरुवात भन्दा उच्च वेतन प्राप्त गर्छन्। "दिग्गज" बोनस र बोनस द्वारा प्रोत्साहित गरिन्छ।
3. उच्च डिग्री सम्भाव्यता संग काम स्थान घर नजिक हुनेछ। प्रत्येक 16 क्षेत्रहरूमा जसमा व्यापारिक सञ्जाल "रूबल बूम" उपस्थित छ, रिक्तताहरू (कर्मचारी समीक्षाहरू धोकागरिएका छैनन्) धेरै पसलहरू र गोदाममा छन्। साक्षात्कारमा उनी प्रश्न सोध्छन्, जसमा शहरका जिल्ला आवेदकले काम गर्न अझ सहज छ। कम्पनीको अधिकांश कर्मचारीहरूले सार्वजनिक यातायात र तपस्यामा पैसा खर्च गर्नुपर्दैन, ट्राफिक जाममा मूल्यवान समय गुमाउनु हुँदैन।
4. शिक्षा, विकासको लागि ठूलो अवसर। कम्पनीले नियमित रूपमा नि: शुल्क सेमिनारहरू र कर्मचारीहरूको लागि प्रशिक्षण दिन्छ। जीसी "रूबल बूम" मा अनुभव सुरु क्यारियरस्टिस्टको लागि धेरै प्रदान गर्दछ। कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई ध्यान दिनुहोस् कि तिनीहरूले व्यवसाय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान पाए।
5. जीसी "रूबल बूम" को प्रायः प्रकाशित गरिएका रिक्त पदहरू सक्रिय बिक्री संग सम्बद्ध छैनन्, त्यसैले धेरै प्रतियोगिहरु द्वारा अपरिभाषित। कम्पनीले ग्राहकहरूलाई "ठंड कल" प्रयोग गर्दैन र वस्तुहरूको लगाव।
6. विकासको लागि राम्रो सम्भावनाहरू छन्। कर्मचारी, एक नियमको रूपमा विक्रेताको स्थितिको लागि स्वीकृत, ईश्वरीय सेवाको छ महिना पछि एक वरिष्ठ बिक्रेताको स्थिति प्राप्त गर्दछ। दुई वर्षमा, धेरै विक्रेताहरू परीक्षक, पर्यवेक्षकहरू, पसल प्रबन्धकहरू हुन्छन्।
7. अनुकूल कर्मचारी। कम्पनीको धेरै कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई जीसी "रूबल बूम" मा अपनाईएको संचारको आवाज मन पराउँछन्। काम पछि, सहकर्मीहरू अक्सर एक क्याफे र च्याटमा सँगसँगै बस्न छनौट गर्छन्। कर्पोरेट पार्टहरू मजा र शोर हुन्।
8. यो उत्पाद दायरा र कम्पनीको शेयर जान्न धेरै लाभदायक छ। प्राय: कर्मचारीहरू उनीहरूको स्टोरमा घरको लागि सही उत्पादनहरू खरीद गर्छन्। धेरैले स्वीकार्य छ कि पैसाको राम्रो बचत गर्न सम्भव छ, कहिले र कुन परिवार रसायन विज्ञानलाई छूट दिइन्छ भनेर जान्न सकिन्छ।
9। कर्मचारी बिना अनुभव को लागी कार्यरत छन्। "रूबल बूम" को एक ठूलो सामूहिक समूहमा पनि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू छन्। धेरै विद्यार्थीहरूले प्रारम्भिक कम्पनीमा इन्टर्नशिप पास गर्छन्, पछि उनी सेवामा प्रवेश गर्छन्।
10. पसलहरु र गोदामहरु को कर्मचारीहरु को लागि परिवर्तनीय कार्य अनुसूची: दिन2दिन,2प्रति रात,4दिन बन्द। यो कार्य शासन हरेकको लागि उपयुक्त छैन, तर धेरै कर्मचारीहरू दिनको समयमा नि: शुल्क समय मनपर्छ। यो तालिका जवान आमाहरूका लागि धेरै सजिलो छ। यदि बालबालिकालाई बच्चा लिने कुनै सम्भावना छैन भने, यो सँधै सहयोगीको साथ परिवर्तन आदान-प्रदान गर्न सम्भव छ।
मानव संसाधन विभाग सेराटोभ मा स्थित छ। एक साक्षात्कार, एक नियम को रूपमा 1 दिन भित्र पुग्छ। "रूबल बूम" कम्पनीको मुख्य समस्याहरू खरिद र कर्मचारीहरू चोरी हो। यसकारण साक्षात्कारमा साक्षात्कारकर्ताहरूले तपाइँलाई कानुन तोड्न सक्षम छन् भनेर बुझ्न खोज्छन्। छलफलको लागि एक महत्वपूर्ण विषय आवेदक को तनाव प्रतिरोध को डिग्री हो।
जीसी "रूबल बूम" मा काम को खनन
व्यापारिक नेटवर्कमा कामको कमजोरीको बारेमा कुरा गरौं। कम्पनी "रूबल बूम" को कर्मचारीबाट प्रतिक्रिया भविष्य भविष्यको नकारात्मक पक्षहरूको बारेमा सिक्न मौका दिन्छ।
नकारात्मक बिन्दुहरूको, कामदारहरूले निम्न कुरा गर्छन्:
1. भुक्तानी उच्च छैन। कर्मचारीहरूले मार्केट वा थोडा उच्च मा वेतन औसत प्राप्त गर्छन्।
2. कर्मचारीको असाध्यै धेरै आदर छैन। धेरै नेताहरू बयान र तेज, प्रायः अपरिहार्य आलोचना गर्न इच्छुक छन्।
3. नियन्त्रण र दण्डको धेरै सख्त प्रणाली। वेतनबाट विभिन्न अपराधहरूको लागि महत्वपूर्ण रकम कटौती गरिन्छ। कार्यालयका कर्मचारीहरू, ढिलाइको लागि जुर्माना र ढिलाइको लागि जुर्मानाहरू (आगमन र प्रस्थान समय इलेक्ट्रोनिक पासहरू द्वारा तय गरिएको छ), गोदाम बिक्रेता र कर्मचारीहरु बाट - व्यापारिक कोठाहरुमा विकार र अलमारतहरुमा सामान को अनुचित बिछाउने को लागी ।
3. यदि कमी छ भने यो रकम एकाइका सबै कर्मचारीहरूलाई वितरित गरिन्छ। जीसी "रूबल बम" नियमित रूपमा चोरीको समस्याहरूको सामना गर्दछ। केहि आउटलेटहरूमा त्यहाँ कुनै पनि गार्डन छैन। तिनीहरूका प्रकार्यहरू विक्रेकरहरूले प्रदर्शन गरेका छन्, जसका प्रायः कमजोर सेक्सको प्रतिनिधि हुन्।
4. पसलहरू र गोदामहरूमा त्यहाँ घरको भित्ताको गहिरो गन्ध हो। धेरै कर्मचारीहरू एलर्जीबाट ग्रस्त छन्।
5. कर्मचारीहरू अक्सर सेवामा रहन बाध्य छन्, सप्ताहांत र छुट्टिहरूमा काम। विक्रेताहरू र गोदामका कर्मचारीहरूको लागि, प्राय: सबै लेखा परीक्षाहरू पूरा गर्न सकिन्छ जुन रातभरि नै हुन सक्छ। रिसाइकिलिंग भुक्तान गरिएको छैन।
6. विक्रेन्डहरू अक्सर सँगै कैशियर्स, क्लीनर, र मूवर्सको काम प्रदर्शन गर्दछ। कमजोर लिंगका प्रतिनिधिहरू सामानहरूसँग बक्सहरू स्थानान्तरण गर्न बाध्य छन्, जसको वजन 20 किलोग्राम सम्म हुन्छ। यदि कर्मचारी गर्भवती हुन्छ भने, उनले एक रोचक अवस्थाको एक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्छ। अन्यथा, यो शारीरिक कामबाट मुक्त हुँदैन।
7. भण्डारका कर्मचारीहरूले अक्सर सामानहरूलाई स्थानमा स्थानान्तरणमा अलपत्रमा बदल्न को लागी काम गर्दछ। रूबल बूम ग्रुप लोरल, प्रोक्टर र ग्याम्बल, ल'ओरिल, हेन्कल, शवरस्लोप, कोलगेट-पामोलिव, एससी जोन्सनसँग आपूर्तिको आपूर्तिको लागि सीधा ठेक्कामा प्रवेश गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको अनुसार, व्यापारिक सञ्जालले पश्चिमी निगमहरू द्वारा स्थापित व्यापारिक कोठाहरूमा उत्पादनको आवश्यकताहरूको अनुपालन गर्न बाध्य छ। यदि तपाई सामानहरू बाहिर बिदामा गल्ती गर्नुहुन्छ भने, कर्मचारीहरू सङ्कलन हुन्छन्।
केही कर्मचारीहरूले जीसी "रूबल बूम" मा कामको नकारात्मक पक्षलाई पनि ध्यान दिन्छन्:
छुट्टिनु र सप्ताहांत भन्दा पहिले 1-2 दिनको वेतन विलम्ब गर्न सक्छ,
यो छिमेकी को पसल मा सेवा गर्न धेरै सुखद छैन,
समयको समयबाट ग्राहकहरूको असहमति सहन पर्छ।
जीसी "रूबल बूम" द्वारा प्रकाशित गरिएका प्रायः रिक्त पदहरू
व्यापारिक सञ्जालले प्राय: नयाँ विक्रेताहरू, केशियर्स, सामान विशेषज्ञहरू चयन गर्छ। भण्डार प्रबन्धकहरू वा लेखा परीक्षकहरूको पदका लागि प्रायः प्रतिस्पर्धाहरू हुन्। यी रिक्तताहरूको अतिरिक्त, एक नियमको रूपमा, कर्मचारीहरू जसले पहिले नै कम स्थानमा जीसी "रूबल बूम" मा काम गरेका छन्। गोदाम कर्मचारीहरूबाट, कम्पनीले प्रायजसो पिकरहरूको चयन गर्छ।
"रूबल बूम" समूहको मानव संसाधन विभाग नियमित लेखापाल, प्रणाली प्रशासक, मार्केटिंग र विज्ञापन विभागका कर्मचारीहरू, आयात विभागको विदेश व्यापार विशेषज्ञहरूको लागि उम्मेदवारहरूको समीक्षा गर्दछ।
प्रत्येक क्षेत्रबाट व्यापारिक नेटवर्कको उपस्थितिको लागी, जीसी "रूबल बूम" मा काम सम्बन्धी विभिन्न राय प्राप्त गर्न सम्भव छ। सेतोटोभ शहर हो जहाँ निगमको केन्द्रीय कार्यालय स्थित छ।
धेरै कर्मचारीहरूले कार्यालयको आलोचनाको आलोचना गर्छन्: उनीहरूले यो पुरानो हो भनेर रिपोर्ट गर्छन्, लिफ्टको कमीको बारेमा सोधे। सबैलाई पहुँच पहुँच मनपर्दैन, जसमा प्रत्येक ढिलाइ लगमा रेकर्ड गरिएको छ।
तर सरोटोभमा सञ्जाल "रुबल बूम" को ध्यान दिन्छन् कि उनीहरूले व्यवसाय गर्ने नियम र व्यवसायको प्रबन्धको बारेमा धेरै अमूल्य ज्ञान पाउँछन्। कम्पनीको अधिक कर्मचारीहरूले टोलीमा विकास गर्ने सम्बन्ध जस्तै। धेरैले पनि मूल्यांकन गरे कि वार्षिक छुट्टी समय मा प्रदान गरिएको छ।
कर्मचारीहरूको "रुबल बूम" प्रतिक्रियाको बारेमा के के हो सकारात्मक? सेराटोभ एक ठूलो शहर हो। कम्पनीले कर्मचारीहरूलाई ढुवानी गर्न एक कर्पोरेट बस प्रदान गर्दछ, विशेष गरी ती रातो रातमा काम गर्ने।
व्यापार सञ्जालका कर्मचारीहरू कम्पनीको जन्मदिनको लागि उपहार र नयाँ वर्षको लागि उपहार पाउँछन्। यो पनि सुखद छ कि फर्ममा एक "विवाहको दोकान" छ, जहाँ एक ठूलो छूट संग तपाई बिरामी वस्तुहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
क्या Saratov को "रूबल बूम" मा काम मा कुनै नकारात्मक टिप्पणी छ? कम्पनीको पहिले कर्मचारीहरू, जसले उनको लागि कम से कम एक वर्षको लागि काम गरेको हो, ध्यान दिनुहोस् कि साक्षात्कार मा निर्दिष्ट भन्दा कम मजदूरी कम थियो। Beginners शिकायत छ कि प्रेरणा धेरै सतर्क छ र कसैले आफ्नै गल्तीबाट सिक्नु पर्छ। सबैजना, अपवाद बिना, कम्पनीहरूको समूहमा स्वीकृत जरिवाना प्रणालीको लागि अनुचित देखिन्छ। पसलहरू र गोदामहरूको कर्मचारीहरूले पनि ध्यान दिन्छन् कि लेखा विभाग र पर्सनल डिपार्टमेन्टको क्षेत्रीय रिमोटनेसको कारण कागजातले लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। धेरै कर्मचारीहरु को लागि यो पनि धेरै सुविधाजनक छैन कि मजदूरी प्लास्टिक कार्ड मा जारी नहीं गरिन्छ, तर नकदी मा, हस्ताक्षर को तहत।
जीसी "रूबल बम" को प्रबन्धन को कर्मचारीहरु को समीक्षाहरु को समीक्षा गर्न को लागी मुश्किल छ। सामरा, स्पष्ट रूप देखि, व्यापार नेटवर्क मा प्रवेश को लागि सबै भन्दा राम्रो शहर होईन।
कर्मचारीहरूले भने कि केही पसलहरू र गोदामहरूको प्रबन्ध कम्पनीको उत्पादनहरू र नगद चोरीमा संलग्न हुन्छन्, र कमजोरीहरू सम्पूर्ण टोलीमा वितरित हुन्छन्। धेरै कर्मचारीहरू श्रम शासनसँग असन्तुष्ट छन्: उनीहरूलाई प्रायः सप्ताहांतमा र छुट्टि कार्यहरू गर्न र प्रशोधन भुक्तानी गर्नुपर्दैन।
केहि न्युयोर्कहरू पनि अपमानजनक छन् कि उनीहरूलाई केवल एक मेडिकल पुस्तक डिजाइन गर्न आवश्यकताको बारेमा भर्ती प्रक्रिया पछि सूचित गरिएको थियो, जसको लागत 3500 रूबल छ।
आस्ट्राखान, "रूबल बूम": वेतन, कर्मचारी प्रतिक्रिया
आस्टकान एक शहर हो जसमा "रूबल बूम" को सञ्जाल धेरै खुल्ला छन्। कर्मचारीहरू भन्नुहोस् कि काम अन्य कम्पनीहरूमा भन्दा खराब छैन। आस्ट्राखान कर्मचारीहरू र तीव्र क्यारियर विकासको सम्भावनाहरू जस्तै: छ महिनाको काम पछि, धेरै विक्रेताहरूले "वरिष्ठ" वर्गलाई नियुक्त गरेका छन्। दुई वर्षको लागी काम पछि, कर्मचारीले लेखा परीक्षक, पसल प्रबन्धक वा पर्यवेक्षकको स्थिति प्राप्त गर्दछ।
केही Astrakhan "rublbumovtsam" भनेर कम्पनी कर्मचारीहरु पसलहरुमा कुनै पनि छूट र लाभ प्रदान छैन चोट। त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी समयमा प्राप्त छैनन् अवस्थामा थिए: महिला सुत्केरी बिदा मा भएका देखि नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि छन्। ज्याला सन्दर्भमा, यो विशिष्ट मात्रा सम्पूर्ण नेटवर्क मा माथि उल्लेख गरिएको थियो, त्यही हो।
बेलग्रेड मा काम
त्यहाँ पसलहरु "रूबल बूम" को एक श्रृंखला हो जहाँ अर्को शहर - बेलग्रेड। कर्मचारी देखि प्रतिक्रिया साधारण प्रक्रिया बारे र तलब प्रतिज्ञा रकम भुक्तान गरिएको छैन भन्ने जानकारी प्रदान। विक्रेता र गोदाम स्टाफ काम दिन को वास्तविक अवधि 11 घन्टा र सप्ताह अक्सर रद्द छन् दुखी छन्। कर्मचारी पनि रात बारम्बार संशोधन को गुनासो।
र्याजान मा जब
केही शहर त्यहाँ कम्पनी "रूबल बूम" कर्मचारी देखि प्रतिक्रिया बारे धेरै नकारात्मक छन्। र्याजान, उदाहरणका लागि, व्यापार नेटवर्क मा काम कि यसको बासिन्दा मा फरक छ, व्यवस्थापन कर्मचारी आफ्नो अनादर गर्ने मनोवृत्ति अत्यन्तै असन्तुष्ट छन्। यसलाई विशेष मा, मुख्य कडा पर्यटकहरू उपस्थिति मा अधीनस्थ स्टोर को कार्यहरू निन्दा जहाँ एक अवस्था हो, धेरै साधारण छ।
सानो सहर मा काम
कर्मचारी 'रूबल बूम ", यस्तो Balashov रूपमा सानो सहर, बस्ने, आफ्नो काम सामान्यतया सन्तुष्ट छ। धेरै पसलहरु छैन आतंक बटन, सुरक्षा गार्ड, अलार्म प्रणाली महंगा। तर paradoxically, thefts दुर्लभ छन्। यस सन्दर्भमा, कर्मचारीहरु दण्ड दिनु छैन। सानो सहर को कर्मचारीहरु 'रूबल बूम "सानो सहर मा, धेरै बासिन्दा प्रत्येक अन्य ठेगाना र लाज चोरी गर्छन कि उल्लेख गरे।
अब तपाईं "रूबल बूम" व्यापार नेटवर्क मा काम बारेमा धेरै विवरण थाह छ। कर्मचारी देखि प्रतिक्रिया यो कम्पनीको काम रेकर्ड विश्वास गर्ने कि नगर्ने अन्तिम निर्णय गर्न मदत गर्नेछ।
एक मनोवैज्ञानिक कसरी बन्न?
सफलता एक बाटो रूपमा Competency मोडेल
परिचारिका: तपाईं भर्ना लागि के आवश्यक छ? के तपाईं एक उडान परिचर बन्न आवश्यक?
आत्म-शिक्षा पूर्वप्राथमिक शिक्षक: व्यवस्थित गर्न को लागि सुझाव
काम विवरण मानवअधिकार प्रबन्धक
Eychar - एक राखने प्रबन्धक? eychary जिम्मेवारी के हो?
सोची-Tuapse - परिवहन कस्तो राम्रो प्राप्त गर्न?
चरण पुस्तिका द्वारा चरण: मनिटर रंग सेट
मास्को को स्पा सैलून मा एसपीए-मैनीक्योर
Daikon को सलाद - खाने एउटा उपयोगी साथै
सबै भन्दा प्रसिद्ध पोलिस लेखकहरूले 20-21 औं शताब्दीपछि।
औषधि "Dibazol"। निर्देशन
शैक्षिक ऋण बचत बैंक: अवस्थाको र issuing लागि प्रक्रिया
स्पा रिसोर्ट्स - अवसर